१५ पटक मूल्यवृद्धि गर्ने निगमविरुद्ध आन्दोलन : क्रान्तिकारीका सिटीईभीटी संयोजक लगाए ताला ! - Kantipath.com
१५ पटक मूल्यवृद्धि गर्ने निगमविरुद्ध आन्दोलन : क्रान्तिकारीका सिटीईभीटी संयोजक लगाए ताला !
इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनरत पाँच विद्यार्थी संगठनहरुले देशभरका नेपाल आयल निगमको डिपोमा धर्ना दिएका छन् । नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियू (माधव नेपाल समूह), समाजवादी विद्यार्थी युनियन (उपेन्द्र यादव समूह) र अखिल छैठौंका नेताहरुले बुधबार बिहान देखि नै धर्ना सहित डिपाे, पेट्रोल पम्पहरु बन्द गरेका हुन् ।
यसै गरि सिटिईभिटि अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका संयाेजक सागर केसीकाे नेतृत्वमा काठमाडौंका विभिन्न पेट्रोल पम्पहरु बन्द गरेका छन् । कलङ्की बालाजु, चाबेल लगाएत विभिन्न क्षेत्रहरुमा अवस्थित पेट्रोल पम्पहरु बन्द गरेका हुन् ।
Previous Previous post: खड्गप्रसाद ओलीको घर फिर्ती : मुसलधारे पानीले पछि लाग्नेको कन्तबिजोग !
Next Next post: अर्थमा शर्माको धमाकेदार इन्ट्री : खोप किन्न ५ अर्ब र पुनर्निर्माणका प्राविधिकको साढे ८ करोड भत्ता निकाशा